स्टेनलेस स्टील डबल फुट कदम F-36-1
आकार: L590 * W410 * H200 / 400mm १ स्टेनलेस स्टील फ्रेम, एबीएस रबर संग कभर २. विरोधी शोर रबर म्यान संग खुट्टा
शानदार एकीकृत गद्दा एफ-F-3-।
मल F--3 36--3 मुख्य सुविधा: १. gas80०-20२० मिलिमिटर ग्यास वसन्तबाट चर उचाई २ क्रोमिड बेस, क्यास्टरहरूको साथ branches शाखा; The. सीट कुशन शीर्ष with.kkock डाउनस्ट्रक्सनको साथ Dia.320mm हो
स्टेनलेस स्टील स्क्रीन F-35
आकार: २00०० मिमी (एल) * १8080० मिमी (एच) मुख्य सुविधा: १. धुउन मिल्ने कपडाको पर्दाको साथ स्टेनलेस स्टील फ्रेम २. चार पट स्क्रिन w.केस्टरहरू सहित
अर्ध-फाउलर ओछ्यान H-2 को लागि गद्दे
आकार: L1930mm × W890mm × H80mm मुख्य सुविधाहरू: १. उच्च गुणस्तरको स्पन्ज घनत्व KKKGS / M3 र वाटरप्रूफ कपडा कभर हो, जुन धोउन सकिने र आगो निरोधक हो। २ जिपरको साथ
शानदार एकीकृत गद्दा H-13
H-13 गद्दा कभर: पीयू वाटरप्रूफ र सास गर्न सकिने सामग्री गद्दा फिलर: उच्च लचिलोपन स्पन्ज र मेमोरी फोम
इलेक्ट्रिक मोबाइल बिरामी लिफ्ट
DE-1C1 अनुप्रयोगहरू ○ products यो उत्पादनहरू दीर्घकालीन सुत्ने बिरामीहरू, र शल्यक्रिया पछि गतिशीलता समस्या वा अस्थिरताबाट ग्रस्त बिरामीहरूको लागि लागू हुन्छ। यो अस्पताल, नर्सि centers केन्द्र वा घर मा caregivers को सहयोग संग प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेरचाह गर्नेहरूले एकल आपरेशनको साथ बिरामीलाई उठाउन वा सार्न सक्दछन्, र श्रम-बचत डिजाइनले देखभालकर्ताको अनुचित बलले गर्दा हुने बिरामीको पीठो चोटबाट बच्न सक्छ। सुविधाहरू: ○ मुख्य फ्रेम पाउडरको साथ उच्च-शक्ति स्टील ट्यूबको बनेको छ ...